Iwe Uri Kudya 3 iwo Masitaera Ekudzidza? | Martech Zone
NeChishanu, Gunyana 18, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Masayiti, maemail uye mablog anongoonekwa uye anotaridzika nehukama nemushandisi Ndiko kuti… iwe unogona kuona (zvinoonekwa) uye unogona kuwirirana (kinesthetic) nezviri mukati. Ndeapi masosi mazhinji, kusanganisira Martech Zone, usaite zvakanaka kudya vateereriZvisinei.
Iwo matatu Masitaera Ekudzidza
zvekuona nemeso - vadzidzi vazhinji vanoonekwa. Ivo vanofarira kuverenga uye kunyanya kudzidza kana izvo zvemukati zvichitsigirwa nemachati nemifananidzo.
Auditory - pane chidimbu chevagari vasingakwanise kudzidza kuburikidza nezvionekwa vega… ivo vanofanirwa kuita chaizvo nzwa ruzivo kuti urinzwisise. Toni yezwi uye inflection zvakakosha kwazvo.
Kinesthetic - vamwe vanhu havadzidze kuburikidza nekuverenga kana kunzwa… vanodzidza kuburikidza nekubatana. Kunyangwe bhurogu ichigonesa iyi mhando yekutaurirana, pane mimwe mikana yekuwedzera kuburikidza nemavhoti, mibvunzo, masiraidhi uye zvimwe zvinoshandiswa.
Sekambani, zvakakosha kuti ako epamhepo ekushambadzira chikafu aya matatu maitiro ekudzidza. Kudzokororwa kwemukati hakuzo kwese kupa chikafu kune anonzwa mudzidzi - iwe unofanirwa kupa nzira yekuti vateerere kune zvirimo kuti vazvinzwisise zvizere. Ichi chikonzero nei akawanda cheesy kumhara mapeji pawebhu anosanganisira vhidhiyo, zvinyorwa uye imwe mhando yekudyidzana.
Ivo havasi kungoedza kufukidza mabhesi avo ese… ivo vakagadzirira kune anonzwika mudzidzi uyo anosvetukira akananga kune vhidhiyo kana iyo kinesthetic mudzidzi anosvetukira akananga kune iko kusangana.
Ndicho chikonzero isu tichienderera mberi nekuwedzera kusvika kwe Martech Zone kuburikidza neyedu radio show, kwedu Youtube mavhidhiyo, kwedu famba kunyorera, uye kwedu infographics.
Tags: zvinonzwikaauditingdyidzanakinestheticzvekuona nemeso
Kwenharaunda Endorsement Tweets Varipo!
Sep 18, 2009 na6: 44 PM
Doug - inotyisa posvo. Ndakaenda kuburikidza ne Teaching Sells kosi payakatanga kuburitswa uye Brian Clark zvechokwadi akachera izvi mumusoro medu - asi se eLearning svikiro.
Ndakave nekubudirira kwakawanda kuburikidza neodhiyo podcast asi ikozvino, ndinoita vhidhiyo uye ndinopatsanura odhiyo sezvawakataura. Kwete chete zvinobatsira kune wekupedzisira mushandisi - asi iwe une maviri anogona zvigadzirwa zvaungatengesa uchibvisa!
Sep 18, 2009 na11: 24 PM
Thanks Jason! Ini ndakadzidza nezve e3 mafashoni ekudzidza kuburikidza neyekutengesa yekudzidzisa kosi yandiri kutora izvozvi futi futi!